Waad sameyn kartaa suuq geyn la shaqeysa AdSense? - Baro Blogging Khabiir
Qeybta boostada:Adsense / Suuq geynta / Kasbo Lacag Online
Xaqiiqdi waad u adeegsankartaa suuq geyn lashaqeyn ah oo ay weheliso AdSense si wada jir ah bartaada internetka. Waa hab fiican oo lagu hagaajiyo lacag sameynta bartaada. Labadaba waad ka faa'iideysanaysaa, helitaanka komishan adoo dhiirrigelinaya wax soo saarkaaga ama dadka kale sidoo kale lacag ku kasbato adigoo soo bandhigaya xayeysiisyo cabbir banner kala duwan ah.
Google waxay si rasmi ah kuu ogolaaneysaa inaad geliso xiriirada xayeysiinta badeecadaada oo ay la socdaan xayeysiisyada soo bandhiga. Waa kan shaashadda.
Wadaagista khibradeyda, goorma ayaa la bilaabay boggeyga waqti dheer dib, Kaliya waxaan ku koobanahay AdSense oo keliya. Iyada oo waqtiga la dhaafay, as I improved my knowledge and getting better in the blogging field.
Si dhakhso leh ayaan u gartay, waxaad ka heli kartaa lacag AdSense illaa aad u weyn 5000+ doolar bishiiba haddii aad haysato malaayiin taraafik tayo leh waana inay ka ahaataa Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Kanada sida waddamada oo kale.
Sidii aan ku jiray marxaladda bilowga ah, Way adkayd in la gaaro tiro intaas le'eg oo soo booqda.
AdSense iyo Amazon, xayeysiisyo kale oo xiriir la leh isla Webpage
Adsense Oo Isku Xidhan
Suuq-geynta Isku-xirnaanta iyo Shabakadaha Xayeysiiska Kale-Beddelka AdSense
Waqtigaas waxaan bilaabayaa inaan fiiriyo xulashooyinka kale si aan u horumariyo dakhliga ku soo gala qorista. Halkaas ayaan ka helay bogga caawinta rasmiga ah ee Google sharraxaadda rukhsadda ku-xirnaanta suuq-geynta shirkadda ay la wadaagaan AdSense ma aha xadgudub noocaas oo kale ah xagga siyaasadda iyadoon loo eegin haddii lala shaqeynayo amazon ama shirkadaha kale.
Intaa ka dib, Waxaan isla markiiba iska diiwaangeliyaa barnaamijka isku-xidhka amazon. Waqtigaas balooggeygu wuxuu helayay tiro kooban oo soo booqdayaal ah oo runtii aan la aqbali karin in laga kasbado kasbashada wanaagsan ee AdSense.
Xitaa halkan, Anigu shaqsiyan waxaan kuu soo jeedinayaa hadaad tahay qof bilow ah arimahan qulqulaya, halkii aad diirada saari lahayd AdSense, waa inaad kubilaawdaa suuq geyn la shaqeysa. Intaa ka dib, ka mid noqo AdSense bilo badan ka dib markii aad bilowdo inaad hesho tiro dad ah oo soo booqda.
Ma is barbar dhigi kartid dakhliga ku soo gala shirkadda AdSense. Suuqgeynta isku-xirnaanta waa warshadaha kobcaya ee kuu oggolaanaya inaad kasbato 1000 + doolar si fudud waxaad ku heli doontaa qadar yar oo taraafiko ah. Waa kan caddayntayda shaqsiyadeed ee ah inaan lacag ku helo oo keliya 100 oo lagu daray taraafikada maalintii.
Waad la yaabi doontaa inaad ogaato in haddii kaliya boqol booqdeyaal bishiiba ay soo booqdaan degelkeyga iyadoo aysan jirin fursad noocan oo kale ah oo lagu kasbado xitaa $70 bishiiba iyada oo loo marayo AdSense.
Si kastaba ha noqotee, Waa go'aan caqli-gal ah in lagu helo oggolaanshaha AdSense oo lala sameeyo suuq-geyn lala xiriiriyo. Sababtoo ah waxba kama waayi doontid halkii aad ka heli lahayd lacag badan oo doolar ah. Waxba maleh ha yaraadee ama dhowr ha noqdee.
AdSense-ka maanta waligiis lama mid aha sanadihii hore, waa inaad ku dadaashaa shaqo badan sidii aad u kasban lahayd dakhli wanaagsan bil kasta. Google AdSense waa wax soo saar Google ah. Waxay noqotay mid caqli badan oo u baahan dadaal badan iyo soo celin, Boqolkiiba boqol kuma guuleysan doontid hadda.
Maxaa ka dhacaya hareeraheeda? Waa hagaag, sharraxaadu way badan yihiin laakiin halkan shakhsiyan waan kuu soo jeedinayaa iska qor Ezoic.
Ezoic waa mid ka mid ah aaladaha la midka ah AdSense ee adeegsada tignoolajiyaddeeda sirdoonka farsamada casriga ah si ay u muujiso lambarka AdSense. Si aad uga hesho oggolaansho Ezoic waa inaad raacdaa dhammaan siyaasadaha AdSense oo aad haysataa oggolaansho. haddii aad markaa markaa si toos ah xaq ugu leedahay xayeysiinta Ezoic.
Marka waa maxay farqiga u dhexeeya EZOIC iyo AdSense kasbashada, aan ku cadeeyo tusaale. Ka soo qaad hadaad qaadanayso 2000 bogagga aragtida Mareykanka, marka laga hadlayo AdSense, waxaad kaliya nooga dhowaan doontaa $5 halkii kun aragtid halka hadaad ku hirgelisay xayeysiinta Ezoic boggaaga waxaad ku dhowaan doontaa 10 ku 12 doolarku way ka badnaan karaan intaas si fudud.
Hadaad ku guuleysato wadista gaariga 50000 booqdayaasha 100000 aragtida bogga bishii ka dib waxaad si fudud ugu dhaqaaqi kartaa aagag aad u horumarsan sida warbaahinta ayaa soo socota ama Kordhi. Labadan barnaamij ee kale runtii waa ka sarreeyaan wixii aad ka fileysey.
Guud ahaan, waa wax la mahadiyo haddii aad sameyso waddo aad lacag uga kasbato AdSense iyo sidoo kale suuq-geyn ku xiran. Waad ku ordi kartaa baloog ama degel websaydh ah adiga oo aan ku xadgudbin. Waxaa la socda, sidoo kale waa inaad tixgelisaa beddelka AdSense sida Ezoic, warbaahinta canabka ah iyo xayeysiintu way baraaraan, iwm. Tani waxay kuu caddayn doontaa inaad faa'iido badan hesho oo aan waligaa kaa niyad jabin.
Immisa lacag ah ayaad ku samayn kartaa Google AdSense
Ardaygu Miyuu Ku kasban karaa Lacag Online ah?
Post HoreImmisa lacag ah ayaad ku samayn kartaa Google AdSense?
Post NextMiyuu Suuqgeynta Affiliate Amazon u qalantaa?